AKUCATSHANGELWE ININGI - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
KUSUKELA ngenyanga edlule kuqubuke inkulumompikiswano ezweni emva kokuthi iKhomishini yamaLungelo aBantu ithe ukuphoqa abantu ukuthi bagomele iCOVID-19 kuyobe kuwuhlukumeza amalungelo abo.
Iqongile le nkulumompikiswano ngeledlule emva kwesimemezelo esenziwe yiDiscovery Holdings. Lesi sikhondlakhondla esihweba eJSE sithe kusukela ngoJanuwari wonyaka ozayo sizokwethula umgomo ozophoqa izisebenzi zayo ukuthi zigome. Le nkampani ithe izozilalela izethulo zalezo zisebenzi ezizonqaba ukugoma, izwe izizathu zazo.
Ngenkathi isakhulunyelwa kude indaba yomgomo uvalo olwalukhona kwakungolokuthi ingabe uyofika nini umgomo eNingizimu Afrika. Kwakungacaci kahle nokuthi ikhona yini imali yokuwuthenga umgomo. Kuthe uma kuqala kuba nesiphithiphithi emva komgomo okwadingeka uphindiselwe emuva ngoba kuthiwa usuphelelwe yisikhathi, kwabonakala ukuthi ngempela sengathi sisenkingeni.
Nokho manje zonke lezo zinkinga sezilungisiwe. Inselelo ekhona kuphela yilena yokuthi kubukeka kunenqwaba yabantu emadolonzima ukugoma ngenxa yezizathu ezihlukene.
Babodwa abathi abawuthembi umgomo. Abanye bathi bavinjwa yinkolo yabo. Abanye bakholwa ngamampunge ashiwoyo ngomgomo njengoba kukhona abakholwa ukuthi iCOVID-19 idalwa wumoya wokudonsa i-internet i-5G. Abanye bathi ababathembi odokotela.
Lilonke inkinga yethu enkulu manje eNingizimu Afrika wukuthi kunenqwaba emanqikanqika ukugoma. Sisagome abantu abawu-7 million ebantwini abawu-41 million esidinga ukubagoma ukuze sifinyelele esibalweni esanele esizothathwa ngokuthi sesigome wonke umuntu, phecelezi i-herd immunity.
Yilesi sizathu esesenze ukuthi inkampani efana neDiscovery incamele ukukwenza impoqo ukugoma kwezisebenzi zayo.
Iqinisile iCosatu neSACP uma bethi ukukhuthaza abantu ukuthi bagome akumele kwenziwe ngendlela ephambene noMthethosisekelo. Nokho kumqoka ukukhumbula ukuthi ekuvikeleni amalungelo koMthethosisekelo akusho ukuthi loko kusho ukuthi kumele kwenziwe noma yikanjani ngoba nakhu abantu bazi ukuthi banamalungelo. Amalungelo awasho ukuthi kukwamaziphathe.
Ukuphoqa ukuthi abantu abagome ukuze bakwazi ukuthola into ethize yinto engaqali manje. Izikole eziningi azivumi ukubhalisa izingane ezingagomile. Yiqiniso ukuthi akumele sivumele izwe kube sengathi liphethwe yizinkantolo. Kumqoka futhi nokuzama ukuxazulula izinto ngokuthi kuboniswane njengokusho kwentando yabantu noMthethosisekelo.
Akekho ongathi wazi konke ngobhubhane iCOVID-19, ikakhulukazi ngoba yigciwane elisha, elishintshashintshayo okwamanje.
Asikabi bikho isikhathi esanele sokuthi kuhlolwe umgomo omusha ngokupheleleyo, nokusho ukuthi empeleni uhlolwa kwabavuma ukugoma.
Nokho esikwaziyo wukuthi inqwaba egomayo ayinankinga, nokuthi emazweni lapho sekugonywe khona isibalo esanele sabantu “impilo isibuyele kokwejwayelekile”.
Izinkinga esibhekene nazo eNingizimu Afrika zijulile. Isibalo sabantu abangasebenzi sesifinyelele ku-34.4%; izinga lobubha nokungalingani liphezulu.
Ukungagomi kwabantu kwenza ukuthi ziqhubeke zande lezi zinkinga ngoba kusho nokuthi umnotho awukwazi ukuvulwa ngokupheleleyo.
Kungabe ngempela ilungelo lokungagomi lidlula izidingo zezwe?